पूर्वाधार विकासकाे लागि एडिबिद्वारा नेपाललार्इ १० अर्ब ऋण सहयाेग
काठमाण्डौ, माघ २९ । एसियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई ग्रामीण सम्पर्क सुधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु. १० अर्ब ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त बैंकले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडकको पुनःर्संरचनाका निम्ति रु. १० अर्ब बराबरको प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराउने भएको हाे ।
आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा ऋण तथा अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदाख्नोभ र अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरे ।
अर्थसचिव अधिकारीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा एसियाली विकास बैंकबाट निरन्तर रुपमा प्राप्त सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।